Iza izahay - ULLER
ANDRIAMANITRA ANDRIAMANITRA: NY TENAN'NY FOMPOANA
Uller® dia marika noforonina sy ho an'ny mpitia FREERIDE. Ny vokatra teknika avo lenta ho an'ny skiers za-draharaha indrindra mila ny vokatra izay manao tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra na fepetra takiana.
Izahay dia mitondra ny anarantsika mankany Espana avy any Scandinavia, iray amin'ny faritry ny faritany miaraka amin'ny kolontsaina ririnina lehibe indrindra, indrindra fa avy any Norvezy hatramin'ny Uller dia Andriamanitry ny Ririnina.
Marika voalohany ririnina Espaniola
Uller® no marika voalohany amin'ny teny Espaniola vita amin'ny ririnina. Vondron'olona mpangalatra mpankafy be mpitia ny freeride izahay, izay nanapa-kevitra ny hamorona masirasira manokana izahay mba hananany izay mifanaraka tsara amin'ny maodely ski.
Nandeha an-tongotra ny sasany taminay satria vao 3 taona monja izahay ary tia ny piste tsy misy mitovy amin'ny taonany raha toa ka lehibe kokoa noho ny volazy ny skis ary nilentika ny masonao. Izahay dia nanao zipo-oram-panala tamin'ny vanim-potoana tamin'izany, fa tsy nanala azy sy nanampy anao dia nifofofofo ary nanjary sarotra ny fahitana, ankehitriny miaraka amin'ny Uller® izahay dia tsy fahatsiarovana mahafinaritra fotsiny.
Namboarina mba handrakofana ireo filàna fangatahana FREERIDE faran'izay ilaina indrindra miaraka amin'ny singa azo antoka tsara indrindra amin'ny kalitao ambony indrindra izay miantoka fampisehoana ambony amin'ny toe-javatra ratsy indrindra. Izahay no andramana ny vokatra rehetra entin'izy ireo amin'ny haavon'ny adin-tsaina ambony indrindra mba hahazoana antoka fa mamaly araka ny antenaina avy amin'izy ireo.
TENA TOKONY HANAIKY AN-TRANO IZAO?
HAFATRA NY HAFATRA AZY
Na dia tiantsika ny fototra sy ny azo itokisana aza dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana dizitaly izahay, ka raha te hahita anay izahay dia afaka mandefa hafatra eto amin'ity taratasy ity izahay ary hamaly anao haingana araka izay azo atao izahay.